प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अन्तर्वार्ता | Seto Patrika
काग पनि नआइकन कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्ने एकथरी छन्। काग आएको भए पनि लग्यो कि भन्ने आशंका गर्नु एउटा हुन्थ्यो। तर, यहाँ त काग आएकै छैन। अब त्यसपछि कान छाम्ने कुरा पनि नगरीकन कता लग्यो कान भनेपछि यता लग्यो भनेर त्यतै कुद्ने प्रवृति देखियो। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विशेष परिस्थितिमा सामान्य अवस्थाका कानूनहरूभन्दा विशेष परिस्थितिकै कानून लागू हुन्छ। विशेष परिस्थितिसम्बन्धी कानून २०२० ले खरिद प्रक्रियालाई नेपाल सरकारको मन्त्रालयको महानिर्देशक वा पछिल्लो समयमा संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको महानिर्देशक लगायतले तत्ककाल खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो महामारीको अवस्था हो, मान्छे बचाउने कुरा हो। मान्छे बचाउने अवस्थामा यस्ता कुराहरूमा हामी पर्खेर बस्न सक्दैनौँ। खरिद प्रक्रियाा भनेर मान्छेको लस्कर मर्ने, रोग फैलिइरहने, हामी त्यो कुरा हुन दिन सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यसको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। विभागीय महानिर्देशकलाई सम्झौता गर्ने, आह्वान गर्ने, छोटो अवधि दिने, खरिद गर्ने, सोझै पनि खरिद गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। विभागीय प्रमुख वा महानिर्देशकले यो काम गरेर एक तह माथिलाई जानकारी गराउन सक्छ, कानूनी व्यवस्था यही हो।
आवश्यक सामग्री खरिद गर्न मन्त्रिपरिषदले यस ऐन बमोजिम विशेष परिस्थितिमा आ-आफ्नो अधिकार यसरी प्रयोग गर्नू भनेर त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै नीतिगत रूपमा निर्णय गरिदिएको हो। त्यहीअनुसार महानिर्देशकले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए। प्रक्रिया अगाडि बढाउनेवित्तिकै त्यसमा राजनीति हुनथाल्यो। कुन्नि के ग्रुप, बालुवाटारबाट संरक्षित यस्तो उस्तो भन्ने बकवासहरू त्यसमा मिसाइए। र, अत्यन्त गलत उद्देश्य र गलत नियतका साथ त्यसलाई प्रचारबाजी गरियो।
सामान आइपुग्यो। तर, सामान भनेजति आएन, भनेको गुणस्तरमा आएन आदी कुराहरू गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले खरिद प्रक्रिया रद्ध गरे। जुन कम्पनीले ल्याउने कबोल गरेको थियो, त्यसको धरौटी जफत गरे। उसको माल गुणस्तरको भएन र समयमा ल्याएन, मात्रा पुग्नेगरी ल्याएन, कबुलअनुसार काम गरेन भनेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरे। उनले त्यो काम गरेपछि मैले पनि सञ्चामाध्यमबाट थाहा पाएँ। हुन चाहिँ उनले यस्तो यस्तो रहेछ भनेर पहिले प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी गराउनु बान्छनीय हुन्थ्यो। यससम्बन्धमा किन त्यसो भएन भनेर हामी छानबिन गरिरहेका छौँ। अधिकार भए पनि परिस्थितिको जानकारी नगराइकन सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउनुपर्ने र यस्तो आलोचनाको स्थितिमा सञ्चारमाध्यमबाट भइरहेको आक्रमणको परिस्थितिमा हामीले फेरि त्यसप्रकारले जानकारी पाउने र ती आक्रमणहरूसँग सामना गर्नुपर्ने अवस्था उपयुक्त होइन। मैले भनेको छु, कुनै प्रकारको अनियमितता छ भने नेपाल सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको कमिटमेन्ट हो, मैले भनेको छु म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ। कसैले पनि गर्छ भने त्यसको छानबिन गर्छु र कारबाही गर्छु। अहिले म धेरै नभनौँ।
यो खरिद प्रक्रियामाथि अहिले छानबिन भइराखेको हो?
अहिले हामी आन्तरिक रूपमा बुझ्ने काम गरिराख्या छौँ। यो उपयुक्त भएन भनेर त डीजीले नै खारेज गरिसकेको, धरौटी जफत गरिसकेको, ब्ल्याकलिस्टेड गरिसकेको अवस्था छ। तर, त्यही कुराको, ब्ल्याकलिस्टेड गर्दासम्म, धरौटी जफत गर्दासम्म, भनेजस्तो सामान आएन भन्नेकुराको माथि रिपोर्टिङ किन भएन र एकैचोटी यस्ता कदमहरू किन चालिए ? यसको प्रचारसँग कति सम्बन्ध छ, यथार्थसँग कति सम्बन्ध छ ? यी कुराहरू हामीले आन्तरिक रूपमा त बुझ्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ।
तपाईंले अघि भन्नुभो, प्रक्रिया हेरेर मान्छे मर्न दिनुभएन, सामान ल्याउनुपर्‍यो। अहिले सामान ल्याउने अर्को विकल्प अगाडि बढाइसकिएको छ। सँगसँगै विवादित बनेको खरिद प्रक्रियामा बदमासी गर्नेहरूलाई एक्सन लिइएन भन्ने पनि कुरा उठेको छ नि?
बदमासी भएको छ भने कारबाही हुन्छ। यसमा कुनै सन्देह छैन। तर, हामीकहाँ हल्ला चलाएर प्रतिभाको हत्या गर्नेहरू पनि छन्। कुनै प्रतिभा नेपालमा जन्मिन नपाओस्, कोही पनि शुद्ध छ भनेर जनताले बुझ्न पाउने अवस्था नहोस् भन्ने त्यो समूहको चाहना छ। सबैलाई मुछिदिने, सबैलाई भ्रष्ट भन्ने गर्छ। जो भ्रष्ट छैन उसलाई भ्रष्ट छ भन्ने हल्ला गर्छ, जो बढी भ्रष्ट छ उसकै स्वर चर्को हुन्छ। हामी त्यो परिपाटीसँग बग्दैनौँ।
तपाईंले त मैले खरिद प्रक्रियाबारे सञ्चारमाध्यमबाट मात्र थाहा पाएँ भन्नुभो। तर, केही सञ्चारमाध्यमले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा टेण्डर प्रक्रिया रद्ध गरिएको हो भनेर लेखेका छन् नि?
होइन। ती सञ्चारमाध्यमहरूले गलत जानकारी प्रवाह गरेका हुन्, के उद्देश्यले त्यसो गरे थाहा छैन। महानिर्देशकले पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यो प्रक्रियालाई रद्ध गरियो, त्यो कम्पनीलाई ब्ल्याकलिस्टेड गरियो, उसको जमानत पनि जफत गरियो भनेको कुरा मैले सञ्चारमाध्यमबाटै सुनेको हुँ।
सञ्चारमाध्यममा चाहिँ तपाईंलाई यो प्रक्रियामा तपाईंकै नजिकका केही मन्त्री, सचिवालयका केही मानिसहरूले गुमराहमा राखे, पछि मात्रै तपाईंले थाहा पाएर रद्ध गराउनुभो भन्ने कुरा पनि आइराखेका छन् नि ?
मेरो सचिवालयको विरुद्ध त शुरूदेखि नै हमला छँदैछ। किनभने सचिवालयमा भएपछि मलाई सहयोग गर्नु स्वाभाविकै हो। मन्त्रिपरिषद्‌मा भएपछि मन्त्रीहरूले मलाई सहयोग गर्नु स्वाभाविकै हो। मेरा सहयोगीहरूमाथि हमला शुरूदेखि नै भइरहेकै हो। मेरो सचिवालयका सदस्यहरूको डिफेन्ड गर्‍यो भन्लान्, तर म के ठान्छु भने मेरो सचिवालयका सदस्यहरू त्यति कमजोर छैनन् कि मैले ढाल बनिदिनुपरोस्, मैले डिफेन्ड गर्नु परोस्। तर, म कतिमात्रै भन्छु भने यो त मलाई सहयोगी हात बढाउने, मलाई सहयोग गर्ने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको उद्देश्यमा समर्थन वा सहयोग गर्नेहरूमाथि केही तत्वहरूको निरन्तरको र निराधार हमला सदावहार रूपमा चलेकै छ। मैले त्यतिमात्रै भन्न खोजेको हो।
सचिवालयमा बसेर मेरो आलोचना गरेर, मलाई गुमराहमा राखेर असफल बनाउने भूमिका खेलिदिनुपर्थ्यो भन्ने उहाँहरूको आग्रह होला। विभिन्न पत्रिका र सञ्चारमाध्यमका वा गलत राजनीतिक उद्देश्य बोकेकाहरूको सुलसुलेको रूपमा काम गरिदिनुपर्थ्यो, कुनै पनि निर्णयहरू वा कुनै पनि छलफल, सल्लाह, आदी कुराहरू संवाददाताको रूपमा सम्प्रेषण गरेर उनीहरूलाई मद्दत पुर्‍याइदिनुपर्थ्यो र देशविरुद्धको एउटा चक्रव्यूहका गोटी बनिदिनुपर्थ्यो भन्ने आग्रह हुनसक्छ। त्यो भएन, अनि रिसाए।
अस्तिको सम्बोधनमा तपाईंले जीवन र स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसलाई लिएर थुप्रै टिकाटिप्पणी पनि भए नि ?
यो सिधा कुरा छ। स्वतन्त्रता मान्छेलाई चहिने कि लासलाई ? जीवनलाई चाहिने कि लासलाई ? तपाईंले जीवनविनाको स्वतन्त्रता रोज्नुपपर्‍यो भने कस्तो हुन्छ ? यो एउटा मानवीय सेन्टिमेन्टको कुरा होला। तर, हाम्रो जस्तो आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएको, परिवर्तनको जगमा भर्खर रचिएको सविधान, भर्खर गठन गरिएको पणाली, भर्खर सञ्चालन हुँदै गरेको स्थायित्वतर्फको लोकतान्त्रिक प्रणालीको अवस्थामा यी कुराहरूको भावनामा खेल्नखोज्ने एकथरी तत्वहरूले त्यसलाई बंग्याउन खोजे। म आधा शताब्दीभन्दा अलि बढी लोकतन्त्रका लागि काम गरेको, जिन्दगी जोखिममा राखेर लडेको व्यक्ति हुँ। यस्तो मान्छेलाई उनीहरूले अलोकतान्त्रिक देखाउन चाहेका हुन्। फेरि पनि म के भन्छु भने जीवनरक्षा सबभन्दा पहिलो कुरा हो। खाना, वस्त्र चाहिने जीवित मान्छेलाई हो। आवास, स्वतन्त्रता चाहिने, स्वाधीनता चाहिने जीवित मान्छेलाई हो। त्यसकारण हामीले पहिला केमा ध्यान दिने ? यो परिस्थितिमा भर पर्छ।
देशमाथि आक्रमण भइराखेको छ भने राष्ट्र नै प्रमख कुरा हुन्छ, राष्ट्रको बचाऊ गर्ने कुरा प्रमुख हुन्छ। त्यसका लागि मान्छे देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत हुन्छ र देश, मानवीय महत्ता, अर्थ र स्वाभिमान जोगाउनका लागि ऊ लडाईंको मैदानमा सामेल हुनसक्छ। बलिदानी दिन तयार हुनसक्छ। त्यो सन्दर्भको त्यहाँ अर्थ हुन्छ, जहाँ तानाशाहहरूले जनतालाई अधिकारविहीन बनाएर बलका भरमा थिचेर राखेका हुन्छन्, जनताका आवाजहरू बन्द गरेका हुन्छन्, सबै प्रकारका स्वतन्त्रताका हकहरू खोसेका हुन्छन् र बाँच्नुको अर्थबाट जनतालाई तल झारेको हुन्छन्।
त्यस्तै दासप्रथामा दास मानिस होइन एउटा यन्त्रको रूपमा हुन्छ। उसले मानवीय मूल्य, महत्ता र गरिमाको रक्षाा गर्न सकेको, पाएको हुँदैन। र, उसले त्यसबारेमा सोच्न पनि पाउँदैन। सोच्यो भने उसको हत्या गरिन्छ। किनभने त्यसले विद्रोह जन्माउन सक्छ। त्यसकारण पहिले नै उसलाई कोपिलैमा निमोठिन्छ। हामीले त्यो आफ्नो जीवनमा भोगेका छौं, जतिबेला तानाशाही थिए, जनताका हकअधिकारहरू सम्पूर्ण रूपमा खोसिएका थिए। अभिव्यक्तिका स्वतन्त्रता खोसिएको, आफ्ना हितबारे बोल्न नपाइने, शान्तिपूर्ण र कानूनी बाटाहरू बन्द गरिएको र निहत्था जनतामाथि बलको भरमा उसको मानवीय जीवनलाई नारकीय वा अमानवीय तहमा झारिएको हुन्छ हुन्छ भने त्यस्तो बेला शासक र शासनका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने हुन्छ। आन्दोलनमा उत्रिँदा बलिदान पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा दिएको बलिदानलाई जीवन पहिलो कि स्वतन्त्रता भन्ने प्रश्न उठाईंदैन। त्यो आन्दोलनको परिवर्तनको सन्दर्भ हो र मानवीय जीवनको तहमा उठाउने प्रयासको निम्ति गरिने बलिदानको कुरा हो। त्यो अवस्थामा बलिदान महत्वपूर्ण हुन्छ।
तर, हामी अहिले महामारीसँग लड्दैछौँ। हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने सबभन्दा बलियो अस्त्रको प्रयोग गर्नु परिराखेको छ। यतिबेला हामी घरभित्र बस्न अनिवार्य छ, स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न पनि घरभित्र बस्नुपर्छ र बाँच्नुपर्छ। यो महामारीको अवस्थामा हाम्रा फ्रिडमका मूल्यहरू भनेर कविता लेख्ने, कवि गोष्ठी गर्ने होइन। विश्वलाई तबाह गरिरहेको कोरोना भाइरसको विरुद्ध सबभन्दा प्रभावकारी अस्त्र घरभित्र बस्ने, लकडाउन हुने र एक अर्कामा सम्पर्क सम्बन्धबाट दूरीमा बस्ने यस अवस्थामा जीवन पहिलो कुरा हो, जीवन बचाउने पहिलो कुरा हो। अहिले के लोकतन्त्र खतरामा परेको छ ? के अहिले हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा परेको छ ? यो जीवन बलिदानका निम्ति आह्वान गर्नुपर्ने बेला हो ? यतिबेला हामीले जीवनरक्षाका निम्ति आफू, आफ्नो परिवार, आफ्नो समुदाय र राष्ट्रको जीवनरक्षाका निम्ति तयार होऊ भन्नुपर्ने अवस्था हो। त्यसका निम्ति सामाजिक दूरी सबभन्दा प्रभावकारी कुरा हो। त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यतिबेला अलिकता असुविधा भयो होला। हामीले हाम्रा अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाएनौँ होला। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर त्यसो गर्न नपाएको होइन। यो सरकारको रूचि वा ख्वाबको वा सरकारको आवश्यकताको कुरा होइन। यो देश र जनताको आवश्यकताको कुरा हो। जनताको जीवनरक्षा गर्ने कुरा हो।
त्यसकारण हामीले अलिकति फ्रिडम एक्सरसाइज गर्नसक्ने अवस्था छैन। मैले सम्बोधनमा त्यही भनेको हुँ। यतिबेला जीवनरक्षा प्रमुख कुरा हो। खरिदप्रक्रिया छोटो बाटोबाट गर्नुपर्‍यो, घरभित्र बस्नुपर्‍यो। हिँड्न डुल्न, भोजभतेर गर्न, मेला, रमाइलो गर्न संविधानमा अधिकार लिपिबद्ध छन्। तर, भोलि सर्वनाश हुने सम्भावनाका खतराहरू छन् भने देश र जनताको रक्षाका लागि ती खतराहरूलाई अन्त्य गर्न यी कुरा हामीले गरेका बेला स्वतन्त्रताका कवि गोष्ठी गर्ने ? स्वतन्त्रताका गीत गाउने ? हामीले त जिन्दगीभरि स्वतन्त्रताका गीत गाएका छौँ नि। सिंगै जिन्दगी स्वतन्त्रताको लडाईंमा बिताएका छौँ।
अहिलेको परिस्थितिमा जीवन पहिलो हो। नेपाली जनताको जीवनरक्षा पहिलो कुरा हो। त्यसकारण बडा डेमोक्र्याट पल्टिएर आहा ! मेरो स्वाधीनता, आहा ! मेरो स्वतन्त्रता भन्ने कविता लेखेर गोष्ठी गर्ने बेला यो होइन। हामी गोष्ठीमा होइन, लडाईंमा छौँ। जनताको जीवनरक्षाको लडाईंमा छौँ। कहिले राष्ट्रको रक्षाको कुरा हुन्छ, कहिले लोकतन्त्रको रक्षाको कुरा हुन्छ, कहिले आमजनताको जीवनको रक्षाको कुरा हुन्छ। यतिबेला आमजनताको जीवनरक्षाको कुरा पहिलो हो। त्यति नबुझेर बहसमा उत्रिने विद्धानहरूसँग त म बहस गर्न आवश्यक पनि ठान्दिनँ।
अब केही व्यक्तिगत प्रसंग, तपाईं आफैंले रोगसँग निकै संघर्ष गर्नुभएको छ, यो रोगलाई कसरी जित्न सकिँदो रहेछ?
सबभन्दा पहिलो कुरा त मनोबलको कुरा हो। यदि मान्छेले मनोबल उच्च राखेन र डरायो भने त्यस्तो बेलामा अरु सबै अंगले काम गरे पनि मुटुले काम गर्दैन र हार्ट फेल हुन्छ। कोही कोही मान्छे भएको केही हुन्न, कुनै कुरा सुन्छ त्यो धान्न सक्दैन र हार्ट फेल भएर जान्छ। त्यही भएर मुटुका बिरामीलाई यस्तो उस्तो नसुनाउनू भन्ने गरिन्छ। मुटुको बिरामीले पनि मनोबल उच्च राख्यो भने रोगसँग लड्न मद्द पुर्‍याँछ।
मर्ने बेलामा के सोचिन्छ भन्ने कुरा त थाहा हुन्न, किनभने मान्छे मरिहाल्छ। तर, मसँग त्यो अनुभव पनि छ। म हेलिकप्टरबाट खसेँ, पाँचहजार फिटबाट खस्दै गर्दा कसैले बाँच्छु भन्ने सोच्दैन। त्यसकारण मर्दैछु भन्ने थाहा पाएपछि मान्छेलाई कस्तो लाग्छ र के सोच्छ, त्यो अनुभव मसँग छ। गोली हान्न लाँदै गर्दा कस्तो सोच्छ र गोली नहानेर अर्कोतिर लैजाँदा के सोचिँदोरहेछ भन्ने अनुभव पनि मसँग छ। बिरामी भएर मर्दैगर्दाको अनुभव पनि छ र त्यहाँबाट बाँचेको अनुभव पनि छ। यौटा कुरा चाहिँ के भने अप्रेसन थिएटरमा जान्छु भने मलाई एनेस्थेसिया दिइन्छ, म बेहोस हुन्छु, मेरो मुटुको धड्कन वा श्वासप्रणालीमा गडबड आउनसक्छ। त्यस्तो बेला पनि मेरो शरीर, शरीरका अंग र सेलहरूले चुस्तदुरुस्त ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर गइन्छ वा के पो हुने हो भन्ने त्रास बोकेर थिएटरमा पस्छ, त्यसको ठूलो अन्तर हुन्छ।
बेहोस हुँदाखेरि मस्तिष्क पनि बेहोस भएको हुन्छ। तर, हाम्रो शरीरका कतिपय कुरा अटोमेटिक छन्। कतिपय अंगहरू अटोमेटिक छन्। ती मस्तिष्कबाट निर्देशित हुँदैनन्। मुटु, फोक्सो, कलेजो, पेट, आन्द्रा, रक्तनली मस्तिष्कबाट निर्देशित भएर चल्दैनन्, अटोमेटिक नै चलिराखेका हुन्छन्। कतिपय चाहिँ मस्तिष्कको निर्देशनमा चलिराखेका हुन्छन्। यो दुईप्रकारको सिस्टम भएको हुनाले बेहोस हुँदाखेरि पनि मानिसको मनोबलको प्रभाव सेलहरूमा र अटोमेटिक संचालन भइरहने अंगहरूमा परेको हुन्छ। त्रास नलिइकन अप्रेसनमा गयो भने बाँच्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। अत्यन्त त्रासका साथ अप्रेसनमा गयो भने बाँच्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ। किनभने शरीरका अंग र सेलहरू पनि त्रसित भएका हुन्छन्। त्रसित अवस्थामा धेरै कुरा गाह्रो हुन्छ। रोगसँग लड्ने एउटा विधि यो हो।
तर, यसैले मात्र रोगसँग लडिन्छ भन्ने होइन। कस्तो रोग हो ? कस्तो अवस्था छ ? कति दक्ष डाक्टर छ ? कति प्रभावकारी औषधि छ ? कति उपयुक्त उपकरण छ ? आदी कुराहरूको पनि सम्बन्ध हुन्छ।
जहाँम्म भाइरसको कुरा छ, इम्युन सिस्टम दह्रो राखेर इम्युन सिस्टमले नै पराजित गर्ने हो। त्यसलाई मर्ने मौका दिने कि फैलिन दिने भन्ने चाहिँ हाम्रोे हातमा पनि हुन्छ।
यसपालि मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अप्रेसन थिएटरमा लिएर जाँदै गर्दा तपाईंले चाहिँ के सोच्दै हुनुुहुन्थ्यो ?
यसपटक म थिएटरमा जाँदै गर्दाखेरि केही सोच्नुपर्ने अवस्था थिएन। किनभने म केही घण्टाको अप्रेसनपछि होसमा आउँछु र फेरि काममा फर्कनथाल्छु भन्नेमा निश्चिन्त थिएँ। त्यो निश्चिततामा मैले इहलोक, परलोकको बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था थिएन। ममा एक प्रतिशत त के, शून्य शून्य शून्य एक प्रतिशत पनि डर थिएन। म बाँच्ने कुरामा विश्वस्त थिएँ। यो लोकमा के होला कसो होला भनेर सोच्नुपर्ने, अथवा मेरो देश र पार्टी के होला भनेर सोच्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । म छँदैछु, म भएपछि यी कुरा मै मै गरिहाल्छु भन्ने थियो। अप्रेसन गर्नु छँदैछ, अप्रेसन गर्दा बेहोस बनाइहाल्छ, त्यति समयको बेहोसी हो मेरो, बाँकी त फेरि म छँदैछु भनेपछि थप केही सोच्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन। त्यसकारण मैले केही थप सोच्दा पनि सोचिनँ।
अब अन्त्यमा अलि फरक प्रसंग। २०७६ सालले अन्त्यतिर भयानक संकट लिएर आयो। अब शुरू भएको नयाँ बर्ष २०७७ ले कस्तो सन्देश ल्याउला ?
नयाँ वर्ष प्रारम्भ भइसकेको छ। अघिल्लो वर्ष हाम्रो मात्रै होइन, विश्वकै उत्साहमा पानी खन्याइदिने खालको वर्ष भयो अन्तिमतिर। अंग्रेजी वर्षको नयाँ वर्ष २०२० नै बडा भयावह ढंगले शुरू भएको थियो। हामीले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कतिपय विषयहरूमा नयाँ दृष्टिकोण पेस गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि महशुस गरेका हौँ। त्यसअनुसार हामीले वातावरण, हिमालय, मानवजातिको भविष्य, जलवायु परिवर्तनलगायतका सम्बन्धमा पनि एउटा नयाँ अध्याय शुरू गर्दै थियौँ, सगरमाथा संवाद भनेर। त्यो संवाद हामीले गर्न पाएनौं। भिजिट नेपाल २०२० भनेका थियौँ, त्यो हामीले शुरू नै गर्न पाएनौँ। वर्षको शुरूबाटै हाम्रो दाँतमा ढुंगा लाग्यो। हाम्रा विकासका सफल प्रयासहरू र सफलताहरूका साथ जुन बेगले हामी अगाडि जाँदैथियौँ, त्यो वेगमा कुदिरहेको गाडी निकै ठूलो ढुंगामा ठोक्किएजस्तो भो। ब्रेक पनि लगाउन पाएको स्थिति होइन, ठोक्किएर रोकिने खालको स्थिति भयो।
गएको वर्षको अघिल्लो समय उत्साहजनक नै थियो। तर, पछिल्लो समय धेरै कठिन र कठिन दिशातर्फको हाम्रो यात्रा बन्यो। प्रत्यक्षतः कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यसले पैदा गर्ने अरु समस्यासँग हामी जुधिरहनुपरेको छ। त्यसबाहेक यसबाट निम्तिएका आर्थिक समस्या, आर्थिक सामाजिक जीवनमा पार्ने प्रतिकूल असर आदीले हामी भयावह अवस्थामा प्रवेश गर्‍याैँ।
हामी अलिकति आश्वस्त हुनसक्थ्यौँ, हाम्रो मात्रै देशमा यस्तो भएको भए। किनभने हाम्रा सहयोगीहरू पनि थिए, मित्रहरू पनि थिए। उनीहरूले सहयोगका हात पनि बढाउँदा हुन्, बढाउँदै आएका पनि हुन्। तर, हामीभन्दा बढी असहज र अप्ठ्यारा परिस्थितिमा सहयोगीहरू, मित्रराष्ट्रहरू, छिमेकीहरू सबै परेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी २०७७ सालमा प्रवेश गरेका छौँ।
मैले आफ्नो सन्देशमा पनि भनेको छु, बडो असहज र भारी मनका साथ मैले देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुपरेको र नयाँ वर्षको शुभकामना भन्नुपरेको छ। म फेरि पनि शुभकामनाका रूपमा सबैलाई भन्छु: स्वस्थ रहनुस्, आफू जोगिनुस्, आफ्नो परिवारलाई जोगाउनुस्, आफ्नो समुदायलाई जोगाउनुस्, राष्ट्रलाई जोगाउनुस् र मानवजाति जोगाउनका लागि आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्नुस्। हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने अवस्था छ।
केही समयभित्रै हामी यस महामारीलाई अन्त्य गर्नेछौँ। मानवजातिले यसलाई जित्नेछ। २०२० भित्र नयाँ उत्साह र उमंगका साथ विश्व फेरि अगाडि बढ्नेछ। मानवजातिले दुःख पाएको छ, कष्ट पाएको छ, यसपल्ट पनि पायो। ठूलो क्षति व्यहोर्‍यो। अब सबै राष्ट्रहरूले उचित र आवश्यक कदमका साथ यो महामारीलाई पराजित गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेछ। त्यसका निम्ति म सबै राष्ट्र, सरकार र मानवजातिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मानवजातिको भविष्य फेरि पनि उज्ज्वल छ, उज्ज्वल राख्न सकिन्छ। यो महामारीलाई रोक्न सकिन्छ, हामी सबै दृढतासाथ त्यसमा लागौँ तर, भावनामा बगेर होइन, व्यवहारिक कदम र दृढताका साथ।
Prevसोसल मिडियाको लत छुटाउने फेसबुकको नयाँ फिचर
next‘सरकारी साथ पाउने हो भने स्टार्टअपले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याउनेछ’